Raxan Ka Tirsan Murshaxiinta U Taagan Doorashada Madaxtooyada Ee Maamul Goboleedka Puntland Oo Si Wada Jir Ah U Soo Saaray Bayaaan | Salaan Media
Raxan Ka Tirsan Murshaxiinta U Taagan Doorashada Madaxtooyada Ee Maamul Goboleedka Puntland Oo Si Wada Jir Ah U Soo Saaray Bayaaan
Ka Soo Baxay Qaar ka mid ah Murashaxiinta
Xilka Madaxweynaha Puntlanad
29ka Oktoobar, 2013
Murashaxiinta magacyadoodu hoos ku taxan yihiin waxay u tartamayaan xilka madaxweynaha dawladda Puntland marka la gaaro doorashada ku muddaysan in ay dhacdo 8da bisha Jannaayo ee sannadka 2014. Ka dib markii ay in muddo ah wadar ahaan u qiimeynayeen xaaladda dhaqaale, amni iyo siyaasadeed waxaa u wada muuqatay in ay Puntland soo food saartay xaalad khatar ah oo ay tahay in dadkeedu ka badbaadiyo. Isla murashaxiintaasi waxay isla hubsadeen in sida keliya oo ay Puntland uga badabaadi karto khatarta ay tahay in Puntland ay ka dhacdo doorasho xalaala ah. Sidaas awgeed waxay isla garwaaqsadeen, murashaxiinta kalena ugu baaqayaan, in aan u tartamidda xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aanay ka indhasaabin khatarta puntland ku soo fool leh ee ay u midoobaan sidii ay ku qabsoomi lahayd doorasho xalaal ah.
Qabsoomiddii shirweynihii asaasidda Puntland waxaa guddoomiyey Isimmada Puntland. Waxaa kaloo ay tahay in la is-xusuusiyo in doorashadii labaad iyo tii saddexaad ay adkaan lahayeen inay qabsoomaaan haddii anayn Isimadu faragelin ku samayn xiisadihii siyaasadda ee jirey. Maa daama aan weli lagu guuleysan in Puntland u tallawdo tartan xisbiyo badan, mar kasta oo loo noqdo habka ku dhisan qaab beeleedka, waa Isimmada kuwa go’aaminaya qofka noqonaya xildhibaan Golaha shacabka. Arrimahaas oo dhan waxay ka marag kacayaan in mas’uuliyadda ugu dambaysa ee aayaha siyaasadda uu weli saaranyahay Isimmada. Sidaas awgeed, murashaxiinta bayaankan saxiixay, waxay ku baaqayaaan qabsoomidda Shirkii Isimmada ee uu gogoshiisa dhigay ku-simaha Boqorku, welina aan la laabin..
2-Olole Doorasho oo Xor Ah
3-Guddiga Xallinta Khilaafaadka
4-Amniga Xilliga Doorashada
Murashaxiinta Baaqan Wada gaadhay
1-Gen. Cabdullahi Siciid Samantar
2-Dr. Maxamad Cali Yuusuf
3-Dr. Yaasiin Faarax Cartan
4-Eng. Cali Xaaji Cabdulle Dhegoole
5-Prof. Cabdi Weli Maxamad Cali (Gaas)
6-Dr. Saadiq Eenow
7-Cali Cabdi Awaare
8-Prof. Axmad Cabbaas Axmad (Gacma Gaab)